Ukuphupha ngoqhawulo-mtshato Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ndiphuphe ngoqhawulo-mtshato. Utolika njani amaphupha? Apha sikunika iingcebiso zokwazi intsingiselo yamaphupha.
Esi sibini siqinisekile ukuba uthando lwabo luhlala luhleli. Kodwa ngamanye amaxesha iimvakalelo ziyaphola ngokuhamba kweminyaka.
Kwiimeko ezinjalo, umtshato uhlala uphela kuqhawulo-mtshato, nto leyo esoloko iyinkqubo ebuhlungu. Kwelinye icala, kuya kufuneka uphilise amanxeba emvakalelo kunye nenkqubo yokwaliwa. Kwelinye icala, imicimbi yezemali ihlala ifuna ukusonjululwa, umzekelo, ukuba nithenge izinto ezinkulu kunye. Uqhawulo-mtshato luba luvavanyo loxinzelelo kuni nobabini xa abantwana bekunye bechaphazeleka kukwahlukana kwabazali babo. Ukuba owayesakuba ngumyeni kunye nowayesakuba ngumfazi wakhe abasavani kwaye kukho impikiswano, abantwana iba ngabo abasokolayo.
Iphupha loqhawulo-mtshato lingajika iphupha libe luloyiko kunye noloyiko. Usenokuzithandabuza ezakho iimvakalelo. Ukutolikwa kwamaphupha, imeko yobomi babaphupha iya kuthatha isigqibo.
1 Uphawu lwephupha «uqhawulo mtshato» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uqhawulo-mtshato» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «uqhawulo mtshato» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uqhawulo mtshato» - ukutolikwa ngokubanzi
Isimboli yamaphupha "uqhawulo-mtshato" inokuba nesalathiso sokwenene ekutolikeni amaphupha. Ngokunokwenzeka, ubudlelwane bephupha busengozini ngokwenene. Iphupha linokulumkisa ngomngcipheko wokudibanisa nokuziphatha kwakho. Mhlawumbi umphuphi wayefuna inkululeko engakumbi okanye akanako ukuthembeka.
Uphawu lwephupha "uqhawulo-mtshato" lukhokelela ephupheni kwimeko yeziphumo zezenzo zakho, Oko kukuthi, ukuphulukana nomntu omthandayo. Mhlawumbi umphuphi ufuna ngokwenene ukwahlukana neqabane lakhe kwaye angatshati kwakhona, kodwa akakathathi eli nyathelo. Oku kunokukhokelela kwi ungquzulwano lwangaphakathi, ethi, ngokokutolikwa kwephupha, ibonakaliswe ephupheni loqhawulo mtshato.
Kwinkcazo edumileyo yamaphupha, amaphupha anesimboli yamaphupha amabi ahlala eneentsingiselo ezichaseneyo. Ke uqhawulo mtshato, ukuba umntu uqhawula umtshato ephupheni, oko kuthetha ukunyaniseka y ulonwabo lwasekhaya. Nangona kunjalo, iphupha ngokwalo kufuneka libe negalelo kubudlelwane obonwabisayo ngokuziphatha kwakho.
Ukuba umntu uphupha ngokuqhawula umtshato kwabanye, umzekelo abazali babo, uphawu lwephupha lumele uhayi uxanduva, ndingafuni kuthatha indawo. Nangona kunjalo, ukwahlukana ekutolikeni amaphupha kunokubonisa ukuba awunathamsanqa ekukhetheni amaqabane akho.
Uphawu lwephupha «uqhawulo-mtshato» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha, uphawu lwephupha "uqhawulo-mtshato" luphawu lwempixano yeemvakalelo kwaye lubonisa iingxaki ezibonisa ezakho iimvakalelo. Umphuphi akasonwabanga ngesimo sakhe sangaphakathi. Engazi ukuba uzama ukufunda iikhonsepthi ezintsha ukujongana nobomi kunye nobunzima bemihla ngemihla.
Ukongeza, ukwahlulahlula okanye ukusombulula ukutolikwa kwamaphupha kunokubandakanya ukungazithembi kunye nokungazi, umzekelo uloyiko lokuphulukana. Nangona kunjalo, ezi ikakhulu zinxulumene nezinto zomntu.
Uphawu lwephupha "uqhawulo-mtshato", ngokwengqondo, luphawu lokuba umphuphi woyika ukuphulukana nenxalenye yakhe. Oku kuhlala kunjalo xa umntu ecinezela iimpawu ezithile zokulunga kweqabane. I-subconscious iyazikhusela ngomfanekiso wephupha weqabane langaphambili: Ukulahla kwaye ubuza umphuphi ukuba achaze ngokucacileyo iminqweno yakhe kunye neemfuno.
Uphawu lwephupha «uqhawulo mtshato» - ukutolika kokomoya
Ubuntu bomntu kukuba: Ingcwele (ukukhulelwa kwenyani nganye). Ukuba umanyano ngokwasemzimbeni, ngokwengqondo nangokomoya lusemngciphekweni, phendula ngeemvakalelo zoloyiko.
Ekuchazeni amaphupha okomoya, uphawu lwephupha "uqhawulo-mtshato" luphawu lwe iingxaki: ukulahleka kokugcwala.